Tag: KENYA | Sagal Radio Services
Kenya oo ka hadashay sababta ka dambeysa joojinta duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi
Sagal Radio Services • News Report • May 12, 2019
Dowladda Kenya ayaa faah faahin ka bixisay sababta ka dambeysa go’aankii ay ku joojisay duulimaadyadii sida tooska ahaa uga tagi jiray magaalada Muqdisho ee ka degayay Nairobi, kuwaasoo loo leexiyay Garoonka Wajeer.
Al-Shabaab oo weeraray Saldhig Ciidanka Kenya ku leeyihiin duleedka Mandhera
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerareen Saldhig Ciidanka Kenya ku leeyihiin duleedka magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari.
Darbiga ay Kenya ka dhisayso Beledxaawo oo bur burin lagu bilaabay
Sida ay qorayaan warbaahinta qaar ee dalka Kenya dadwayne careysan oo kusugan degmada Beled xaawo ee gobolka gedo ayaa waxa ay burburiyeen qaybo kamid ah darbiga ay Kenya ka dhistay xadka kala qaybiyo Soomaaliya iyo Kenya.
Ciidamada Kenya oo bilaabay howlgal lagu soo furanayo dhaqaatiir Ajnabi lala soo galay gudaha Somalia
Ciidamada Kenya ayaa bilaabay howlgal ballaaran oo lagu baadigoobayo dhaqaatiir u dhalatay dalka Cubay, kuwaasoo laga soo afduubtay magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari.
Dowlada Kenya oo u yeertay safiirkeedii Soomaaliya kuna amartay Safiirka Soomaaliya inuu ka baxo dalkeeda
Sagal Radio Services • News Report • February 16, 2019
Hubkii ay wateen dalbeydii weerartay Hotel DusitD2 oo noqday kuwo Dowlada Soomaaliya soo iibsatay
Dowlada Kenya oo wada baaritaano dhinacyo badan ah oo la xiriira weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday dhismaha DusitD2 ee magaalada Nairobi ayaa waxaa la xaqiijiyay in saddex ka mid ah qoryihii ay isticmaalayeen dableyda weerarka geysatay ay ahaayeen kuwo ay dowlada federalka Soomaaliya ka soo iibsatay dibadda.
Omamo;”Waxaad tihiin gaashaan adag oo shacabka Kenya ka difaacaya Cadowga.”
Wasiirka Gaashaandhigga dalka Kenya Raychelle Omamo iyo taliyaha ciidamada Kenya General Samson Mwathethe oo booqasho kedis ah ku tegey qaar ka mid ah saldhigyada ay ciidamada Kenya ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay ciidamadaas inay yihiin gaashaan adag oo ilaalinaya shacabka Kenya.
Shan askari oo Kenyan oo lagu diley weerar ka dhacay magaalada Lamu
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in shan askari lagu diley halka toban kale ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen ay miino la qaraxday saaka xilli ay marayeen magaalada Lamu,
Kenya oo Bilowday Inay Dhalinyarada Ka Wacyigeliso Ku Biirista Alshabaab.
Sagal Radio Services • News Report • August 20, 2018
Sarkaal ka tirsan shirkadda Qantas oo isla meel dhigey garoomada diyaaradaha Soomaaliya iyo Kenya
Kenya oo baarayso Xarumo caafimaad oo looga shakiyay inay Daaweeyeen Shabaab ku dhaawacma Dagaalada.
Ciidamad wadanka kenya gaar ahaan kuwa ka howl galo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegay in ey jiraan xarumo caafimaad oo ku yaalla gobolkaasi kuwaa oo daweeya xubnaha xarkada Alshabaab oo ku dhawaacma weerarada Garabka Alshabaab ee kenya ey ku qaadaan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi.
Soomaalida ku nool Kenya oo qabtay kulan lagu uruuriyay 250 kun oo dollar
Sagal Radio Services • News Report • October 23, 2017
Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa xalay qabtay kulan dhaqaale loogu uruurinayay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii todobaad ka hor ka dhacay isgoyska Zoobe, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo ruux.
Shabaab oo weerar khasaare gaystay ku qaaday ciidanka Kenya
Sagal Radio Services • News Report • August 28, 2017
Dagaalyahano ka tirsan Shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada Kenya, xilli ciidamadan ay ku sugnaayeen meel aanan ka fogeyn deegaanka Dhamase ee ku yaalo nawaaxiga Magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari.
Sirdoonka dalka Kenya oo sheegay in ururka Alshabaab uu qorsheynayo inuu weeraro xarunta Baarlamaanka Kenya
Guud ahaan ammaanka xarunta baarlamaanka dalka Kenya ee magaalada Nairobi ayaa sare loo qaaday kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ururka Alshabaab uu qorsheynayo inuu weerar ku soo qaado.